(1)234next> last>>
Posted By - Ko Ko - Nov 28, 2009
According to TIOBE Programming Community index C is closing its gap with Java. The difference between the number 1 and2of the TIOBE index is getting smaller. C is onlyalittle over 1% behind Java now. Both languages showalong-term downtrend, but Java
PHP တတိယအသုံးအများဆုံး Language ဖြစ်လာခြင်း။ ၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာလ TIOBE Programming Community ၏ စစ်တမ်း index အရ PHP သည် သုံးစွဲမှု တွင် တတိယ နေရာသို့ တက်လာ ပါသည်။ TIOBE အဖွဲ့သည် programming languages များ၏ အသုံး ပြုမှု ကို မှတ်တမ်းတင် နေသော အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး၊ မည်သည့် programming language ကိုမှ ကိုယ်စား မပြုသော… more....
Posted By - Ko Ko - Sep 8, 2008
If you are going to learn CSS from scratch, you have probably seenalot of techniques, tricks and tutorials so far. Please see belowalist of sites greately help you learn essential CSS skills.
CSS လေ့လာသူများဖတ်ရှုသင့်သော websites များ။ Web developer များ အနေဖြင့် CSS (Cascading Style Sheet) အကြောင် သိထား ရန် လိုအပ် ပါသည်။ အောက်ဖေါ်ပြ ပါ websites များသည် css လေ့လာ သူများ အတွက် များစွာ အထောက် အကူ ဖြစ်နိုင် ပါသည်။ Source : http://acomment.net/9-top-css-essential-skills-that-every-web-designer-should-learn 1- Making CSS Layouts Creating CSS… more....
Posted By - Ko Ko - Aug 14, 2008
You do not need to beagreat artist to get great looking graphics. In fact, sometimes you do not even have to roll up your sleeves. We have put togetheralist of 20 sites that will help you create icons, favicons, animations and various graphics in no time.
Web Developer တစ်ဦး အတွက် လက်နက်များ။ သင်သည် Web Developer တစ်ဦး ဖြစ် ပါက၊ လိုလျှင် လိုသလို အသုံးပြု နိုင်မည်၊ ကရိယာ တံဆာပလာ များနှင့် အလား တူသော၊ software မျိုးစုံ ကို စုဆောင်း ထားရန် လိုအပ် ပါမည်။ အသုံး ဝင်မည် ထင်သည့် software များကို စုဆောင်း ပြီး အောက်တွင် ဖေါ်ပြ အပ် ပါသည်။ Source… more....
Posted By - Ko Ko - Jun 16, 2008
PHP လေ့လာ သူများ အတွက် အသုံးဝင် မည့် links များ။ Java, Microsoft .net စသည် တို့တွင်၊ အလွန် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝ သော ကုမ္ပဏီ ကြီးများ နောက်ခံ ရှိပြီး၊ ငွေကုန်ခံ ဘေးတီ ပေးနိုင် သဖြင့် နာမည် ကြီးကြ ပါတယ်။ PHP ကတော့ Zend အမည် ရှိ ကုမ္ပဏီ လေး တစ်ခုသာ ရှိ ပါတယ်။ PHP… more....
Posted By - Ko Ko - Jun 6, 2008
The PosteRazor cuts an image into pieces which can afterwards be printed out and assembled toaposter As input, the PosteRazor takes an image and the resulting poster is saved asamultipage PDF document. An easy to use wizard like user interface guides through5steps. PosteRazor is available asaWindows, an OSX andaLinux version It is an open soince GNU licensed project which is hosted on SourceForge.
ရိုးရို Printer ဖြင့် poster ကြီးပြုလုပ်ခြင်။ သင်သည် သင့် ချစ်သူ့ ပုံကို လူတစ်ရပ် လောက်ကြီး သော poster ကြီး အဖြစ် print လုပ်ပြီး သင့် အခန်း တွင် ချိတ်ဆွဲ ချင်တယ် ဆို ပါစို့။ ဘာလုပ် ကြမလဲ။ ၁။ Poster ကြီးများ print လုပ်ပေး သော ဆိုင်တွင် ငွေများများ ပေးပြီး အပ်နှံ နိုင်သည်။ (ပထမ နည်)… more....
Processing time -- 0.0307 seconds.